Xildhibaano ku dhaawacmay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho – Kalfadhi
Xildhibaano ku dhaawacmay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho
Saddex Xildhibaan oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo gaaray dhaawacyo fudud qaraxii maanta ka dhacay agagaarka xarunta Godka Jilacow ee Ciidamada Nabad Sugidda Soomaaliya islamarkaana ku taala degmada Boondheere ee Gobalka Banaadir.
Xildhibaanada dhaawacmay ayaa lagu kala magacaabaa Saynab Maxamed Caamir, Maryan Cariif iyo Cabdikariin Shabeel kuwaas oo marayay goobta uu qaraxa ka dhacay.
Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana gurigiisa uu ku yaalo agagaarka goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa sheegay in uu u gurmaday Xildhibaanada dhibaatada gaartay dhaawacoodana uu yahay mid fudud.
“Waxaan u gurmada Xildhibaan Shabeel oo kamid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxa, waxaa soo gaaray dhaawac fudud waxa uuna joogaa gurigeyga” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo qoraal soo dhigay boggiisa Twitter-ka.
Sidoo kale Xildhibaan Drs Maryam Cariif ayaa la sheegay in dhaawaceeda u aad ufuduyahay islamarkaana ay soo gaareen firir balse mid kamid ah ilaaladeeda uu ku dhintay qaraxaasi kuwa kalane ay ku dhaawacmeen.
Xildhibaan Saynab Caamir ayaa la sheegay in iyadana sidoo kale uu soo gaaray dhaawac fudud lagana soo saaray Isbitaalkii la geeyay. Xildhibaanadaan ayaa ku soo wajahnaa xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya si ay uga qayb galaan fadhiga Golaha Shacabka oo lagu waday in maanta uu ka qabsoomo magaalada Muqdisho.